I-Ikea yongeza i-AirPlay 2 kwizithethi zeencwadi zeSymfonisk | Ndisuka kuMac
I-Ikea yongeza i-AirPlay 2 kwizithethi zeencwadi zeSymfonisk
Kwixesha elidlulileyo inkampani yaseSweden i-Ikea yazisa izithethi zoyilo lweshelufu kunye nenkampani iSonos. Ukusebenzisana phakathi kwezi nkampani zimbini kuqhelekile kwaye kubonakala ngathi ngeli xesha ingaphakathi lesithethi lahlaziywa kunye namacandelo yenze i-AirPlay 2 ihambelane, ukongeza ekongezeni uhlaziyo oluninzi oluncinci.
Ikea Yenziwe ngesandla ngesandla ngu-Ingvar Kamprad ngo-1943 kwaye yaqala njengeshishini lekhathalogu kwidolophu enamahlathi e-Älmhult eSweden. Namhlanje, luphawu lwehlabathi lweemveliso zasekhaya ezisa ukufikeleleka, uyilo kunye namaxabiso amahle. Ezinye iimveliso ezifana nezi zibane ziyahambelana Apple AirPlay enkosi intsebenziswano kunye nenkampani yakwaSonos, inkampani ezinikele kwisandi kuphela.
Isithethi sethala leencwadi ngoku sihambelana ne-AirPlay 2
Izithethi ezihlaziyiweyo zethala leencwadi ezikhutshiweyo zibonisa uyilo olupheleleyo kunye nokumila njengemodeli yokuqala, kodwa ube neprosesa ephuculweyo, inkumbulo eyongezelelweyo, kunye nokusebenza kakuhle kwamandla xa ukwimowudi yokulinda, ngokutsho kwewebhusayithi ye-Dutch tech Tweakers. Enkosi koku bongeza ukuhambelana ne-AirPlay 2.
Yinguqulelo entsha yezithethi ezasungulwa ngo-2019 kwaye, njenge Izithethi zoqobo zeSymfonisk zityhilwe ngo-2019, esi sizukulwana sitsha sifumaneka ngombala omnyama nomhlophe. Ikwagcina inkxaso ye-2,4GHz kunye ne-5GHz inethiwekhi ye-Wi-Fi.NgoSeptemba 2021, i-Ikea iphinde yahlaziya izibane zayo ze-Symfonisk kunye neenguqu ezifanayo kwesi sithethi se-bookshelf.
Okwangoku iimodeli ezintsha ziyafumaneka eNetherlands, kodwa akwaziwa ukuba ziya kufumaneka nini kwihlabathi jikelele. Isizukulwana esitsha sesibane, esikwayi-AirPlay 2 ehambelanayo, sibonise utshintsho oluthile loyilo, ukhetho olwandisiweyo lokwenziwa ngokwezifiso, kunye namava aphuculweyo esandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Ikea yongeza i-AirPlay 2 kwizithethi zeencwadi zeSymfonisk
Ah, ke ezo ziza kuhambelana ne-AirPlay 2 ziyimodeli emitsha yeSymfonisk izithethi (kwaye azikathengiswa eSpain), hayi ezi zangoku! Ewe, mhlawumbi ungayicacisa le nto kwisihloko, kuba kubonakala ngathi ithetha enye into (kuba oko kubonakala ngathi abasebenzisi bangoku baya kuba nako ukonwabela i-AirPlay 2)
Kuyacetyiswa ukuba ufakele uhlaziyo lwamva nje lweMacOS Big Sur kunye neMonterey
I-HomePod mini iza kumazwe amaninzi kungekudala